Mety ho famantarana ny fibromyalgia ve ny fangirifiriana ao amin'ny atidoha?
Ny fibromyalgia dia mety miteraka fanaintainan'ny aretim-be ao amin'ny atidoha
30 / 06 / 2019 /Fanamarihana 0/i aretin-kozatra/av loza
Ankehitriny, nisy rohy iray hita teo anelanelan'ny fihetseham-po mitombo teo amin'ny atidoha sy fibromyalgia.
Fibromyalgia dia aretim-pivalanana fanaintainan'ny aretin-tsinay malefaka izay mamely ny maro, saingy mbola tsy mifantoka amin'ny fikarohana sy ny fitsaboana. Ny diagnostika amin'ny toetra mampiavaka dia miteraka fanaintainana amin'ny faritra lehibe amin'ny vatana (izay mihetsika matetika), olana amin'ny torimaso, harerahana maharitra sy kognitif atidoha zavona (ampahany noho ny tsy fahampian-torimaso).
Efa ela izy io dia niahiahy fa misy ifandraisany ny fihanahana sy ny fibromyalgia. Saingy tsy afaka manaporofo fifandraisana mivantana. Ireo mpikaroka soedoà ao amin'ny Institut Karolinska dia nanatanteraka fandalinana fikarohana an-tsokosoko tamin'ny fiaraha-miasa amin'ireo mpahay siansa amerikanina ao amin'ny Massachusetts General Hospital izay afaka mitarika ny lalana any amin'ny fibromyalgia taloha. Ireo valim-pikarohana ireo dia efa notohanan'ireo ihany koa fandinihana hafa tao amin'ny diary Brain, fitondran-tena ary tsy fanalam-baovao.
Torohevitra momba ny fahasalamana tsotra
Ny ankamaroan'ireo mpikambana ao amin'ny vondrona "Rheumatism and Chronic Pain" dia mitatitra ny fihenan-kevitra manohitra ny fihanaky ny fanafody voajanahary sasany. Ny fikarohana vao haingana dia naneho fifandraisana mazava teo amin'ny tsina sy ny atidoha, ka izany no mahatonga anay hanome toromarika voajanahary ho an'ny fahasalamana tsara amin'ny tsina. Manandrama fanampiana probiotics (bakteria tsinay tsara) na Mamenom-bavony. Ho an'ny maro dia mety hisy vokany tsara izany, ary fantatray koa fa ny fahasalamana tsinay dia tena zava-dehibe tokoa amin'ny fahatsapanao ny hafa - na eo amin'ny lafiny angovo izany na eo amin'ny toe-tsaina.
Fibromyalgia sy fanavotana
Fibromyalgia dia voafaritra ho toy ny rheumatism malefaka marefo. Midika izany, ankoatra ny zavatra hafa, ny fahitanao ny fihetsika tsy mahazatra amin'ny tavy malemy - toy ny hozatra sy ny hozatra. Ireo dia matetika dia mety ho hypersensitive amin'ny olona manana fibromyalgia - izay mitarika fitomboan'ny signal nerve sy be loatra amin'ny ati-doha. Midika izany fa na ny tsy fahazoana aina kely aza dia mety hiteraka fanaintainana lehibe kokoa.
Tsy mahagaga raha nino ny mpikaroka fa mety hiteraka fikarohan-tena matetika kokoa ireo izay manana fibromyalgia.
Ny fandalinana: fandrefesana ny proteinina manokana
Ny mpikaroka dia nanomboka tamin'ny alàlan'ny fandrafetana ireo soritr'aretina tamin'ireo izay nanana fibromyalgia - ary avy eo ny vondrona mifehy. Dia mihasarotra kokoa izany. Tsy hiditra amin'ny antsipirihany faran'izay kely izahay, fa aleo ny hanomezana anao fomba fijery tsy takatry ny saina.
Avy eo izy ireo dia nandrakitra an-tsoratra ny fitomboan'ny fivontosan'ny neural na ny ati-doha na ny lakandranon-hazondamosina - ary avy eo indrindra amin'ny endrika fiasan'ny mazava loatra ao amin'ny sela glial. Ireo dia sela izay hita ao anatin'ny rafi-pitabatabana, manodidina ny neurons, ary misy asa roa lehibe:
Fitrandrahana nourish (anisan'izany ny myelin manodidina ny fibre nerve)
Mampihena ny mahazaka fanehoan-kery ary esory ny fako
Ity sarintany ity dia natao, ankoatry ny zavatra hafa, tamin'ny alàlan'ny diagnostika fitarainana, izay nandrefesana ny asan'ny proteinina manokana antsoina hoe TSPO. Ny proteinina iray izay hita ao anaty habetsaky ny habetsaka lehibe kokoa raha toa ianao ka manana sela be gladi overactive.
Ny fanadihadiana dia nanoratra ny fahasamihafana mazava eo amin'ireo voakasiky ny fibromyalgia mifanohitra amin'ny vondrona mpanara-maso izay manome antsika fanantenana fa io dia afaka manamboatra ny fomba itondrana ity aretina ity amin'ny farany.
Mety hitarika fitsaboana vaovao
Ny olana lehibe amin'ny fibromyalgia dia ny tsy fahafantaranao ny anton'ny olana - noho izany dia tsy fantatrao izay tokony hitsaboana azy. Ity fikarohana ity dia afaka manampy amin'ny farany - ary manome mpikaroka hafa hanana fotoana vaovao mifandraika amin'ny fikarohana am-pitadiavana bebe kokoa an'ity vaovao vaovao ity.
Amiko manokana dia mieritreritra izahay fa mety hitarika amin'ny fanadihadiana sy fikarakarana arakaraka kokoa, saingy tsy azontsika antoka hoe rahoviana no hihatra izany. Fantatsika fa ny fibromyalgia dia tsy mbola faritra iray izay nomena fifantohana be indrindra momba ny fisorohana sy ny fitsaboana.
Ireo valim-pikarohana dia manazava ny soritr'aretina Cognitive
Ny fibromyalgia dia mety hitarika any amin'ny loha tsy ho tafiditra tanteraka tanteraka - antsointsika hoe zavona fibro io. Izany dia noho ny antony maro samy hafa - ao anatin'izany ny tsy fahampian'ny torimaso noho ny fanaintainana mihamitombo sy ny tsy fitoniana ao amin'ny vatana, ary koa ny zavatra efa niahiahantsika hatry ny ela - dia ny tsy maintsy hiadianan'ny vatana tsy tapaka mba hampihenana ny aretina ao anaty vatana. Ary tena mandreraka amin'ny farany.
Ao amin'ireo fizarana roa manaraka dia hiresaka bebe kokoa isika momba ny fomba fanatanjahan-tena vita sy ny sakafo manohitra ny fanaintainana (sakafo fibromyalgia) dia afaka manampy anao hahita ny fifehezana ny fibromyalgia.
Fibromyalgia, Fidiran-dra sy fanatanjahan-tena
Ny fanatanjahan-tena tsy tapaka miaraka amin'ny fibromyalgia dia tena sarotra. Azonao an-tsaina fotsiny ny fomba fihevitry ny fanatanjahan-tena rehefa marary ny vatana iray manontolo. Na izany aza, tena ilaina tokoa ny tsy hijanonanao tanteraka ary hifantohanao amin'ny fanazaran-tena mifanaraka amin'izany - na fanofanana amin'ny fivezivezena, fitsangatsangana any anaty ala na fanatanjahan-tena malemy paika aseho etsy ambany. Ny fitazonana mihetsika dia mitondra anjara biriky amin'ny vatana miasa kokoa miaraka amin'ny fanatsarana ny fivelaran'ny rà - izay afaka manampy anao hitandrina ny fivontosana, satria mety hisy vokany manohitra ny inflammatoire koa izany.
Amin'ity horonan-tsary eto ambany ity dia afaka mahita programa fampiofanana ho an'ireo izay manana fibromyalgia mijaly malefaka marefo kiropraktika Alexander Andorff. Ity dia programa iray izay afaka manampy anao hanatanjaka ny hozatra miverina sy miorim-paka - izay afaka manana fiasa mihatsara sy mivezivezy amin'ny ra.
Fibromyalgia sy ny fihinan'ny anti-inflammatory
Fantatra fa ny fitomboan'ny fanehoan-kevitra mitombo dia manana anjara toerana amin'ny fibromyalgia, zava-dehibe ny hifantohanao amin'ny sakafo izay manafoana ny fivontosana amin'ny vatana. Ao amin'ny lahatsoratra eto ambany dia azonao vakiana bebe kokoa ny momba ny karazana sakafo sasany mahatonga fangirifiriana ao amin'ny vatana (pro-inflammatory) sy ny fomba fampihenan'ny hafa ny fivontosana (anti-inflammatory). Famakiana natolotry ny olona misy fibromyalgia.
Fitsaboana ny Fibromyalgia
Ny fahafantarana fa ny fibromyalgia dia mitarika amin'ny hypersensitivity (mari-pamantarana fanaintainana mitombo) ary ny fanaintainan'ny fanaintainana, dia tsapanao koa fa vondrona marary ity izay mila fikarakarana bebe kokoa noho ny hafa. Ity vondrona marary ity matetika dia matetika no mihinana fanafody fanaintainana be kokoa - ary fomba fitsaboana ara-batana mahazatra toy ny fitsaboana laser musculoskeletal, fanorana ary fanentanana miaraka - ohatra amin'ny mpitsabo aretin-tsaina na mpitsabo kiropractika.
Ny marary marobe koa dia mampiasa fahaiza-mitandrina sy fikarakarana tena izay heveriny fa mahomby ho an'ny tenany manokana. Ohatra, ny fampiasan-kery manohana sy manosika ny bileta point, fa misy koa safidy sy tadiavina maro hafa.
Miangavy anao izahay mba hizara an'io lahatsoratra io amin'ny media sosialy na amin'ny alàlan'ny bilaoginao (azafady mampifandray mivantana amin'ny lahatsoratra). Izahay koa dia mifanakalo rohy amin'ireo tranonkala mifandraika (mifandray aminay amin'ny Facebook raha te hanakodia rohy amin'ny tranonkalanao). Ny fahatakarana, ny fahalalana ankapobeny ary ny fitomboan'ny fifantohana no dingana voalohany mankany amin'ny fiainana andavanandro tsara kokoa ho an'ireo izay manana aretina mitaiza fanaintainana maharitra.
Loharano: fampidirana tsindrona atidoha ao amin'ny fibromyalgia - famotopotorana momba ny famoahana positron amin'ny toerana marobe. 2019.
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/betennelse-fibromyalgi.jpg?media=1648573622 368 700 loza https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 loza2019-06-30 09:51:522021-03-24 10:55:42Ny fibromyalgia dia mety miteraka fanaintainan'ny aretim-be ao amin'ny atidoha
Inona no tokony ho fantatrao momba ny rheumatism Polymyalgia Ireo fahasamihafana ireo ao amin'ny tatatra dia mety hiteraka fibromyalgia